Daraartuu Tulluu - Wikipedia
Kadiir Abdullaxiif Hajjii (Goonni Gosa Dhaala)
Guyyaa dhalootaa: 1972, Bitootessa 21
Bakka dhalootaa: Boqojjii
Daraartuu Tulluu atileetii fiigicha dheeraa tiraakirraa, karaarraa fi maraatooniti. Daraatuun godina Arsiitti, bakka Boqojjii jedhamutti bara 1972, Bitootessa 21 dhalatte. Yeroo ijoollumma ishiis lafa ol ka’aa godina Arsii Boqojjii keessatti loon tiksaa guddatte. Qananiisaanis iddodhuma kanatti guddate.
Daraartuun medaaliyaa warqee Olomppiikii irraatti nyaachudhaan Afrikaa keessaa dubartii ishii jalqabaati. Medaaliyaan warqee Olompiikii bara 1992 irratti nyaatte seenaa moo’icha ishii kan ittiin jalqabde ture. Bara 1993 fi 1994 miidhama jilbaa ishiirra ga’een kan ka’e dorgommii addaan kuttee turte. Bara 1995 dorgommiitti deebi’udhaan, shampiyoonshiippii Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa IAAF qopheesse irratti warqee fudhattetti.
Bara 1996, Shampiyoonshiippii Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa IAAF irratti qopheen ishii waan irraa baheef duubaa kaatee afraffaa taate xumurte. 1997tti, Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa yeroo lammaffaatif yoo moo’attu, Shaampiyoonaa Addunyaa m 10,000 irratti garuu odoo hin hirmaatin hafte.
Daraatuun, bara 1998 fi 1999 mucaa waan deesseef dorgommii irraa fagaattee kan turte yoo ta’u, bara 2000tti dandeettii cimaadhan dorgomitti deebite. Dorgommii m10,000tin Olompiikii irratti warqee yeroo lammaffaatif kan nyaatte yoo ta’u kunis seenaa dorgommii kanaa keessatti dubartii jalqabaa ishii taasise. Akkasumas, Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa IAAFn qophaa’e yeroo sadaffaatif moo’atte. Bara 2001tti dorgommii tiraakii m10,000 Edimentenitti kan moo’atte yoo ta’u kun immoo warqee sadaffaa ishii kan Olompiikii fi kan Addunyaa ture. Walumaa galatti, Daraartuun, medaaliyaa warqee kan Olompiikii fi kan Addunyaa 6 qabdi.
Bara 2001tti, maraattoonii Landanii fi Tookiyoo moo’achudhaan dorgommii maraatoonii milkiidhaan jalqabde. Akkasumas walakkaa maraatoonii Poorchugaal bara 2000 fi 2003tti, akkasumas walakkaa maraatoonii Liisban 2003tti moote. Bara 2005tti Shaampiyoonaa Addunyaa irratti sa’aatii saffisa kan dhuunfaa ishii 2:23:30 galmeessudhaan 4ffaa baate. Bara 2009tti, umurii 37tti, Maraatoonii Magaalaa Niwuu Yoork warra akka Paawulaa Raadkiliif, Liyudmiilaa Peetroova, fi Saalina Kosgee moo’achuudhaan warqee nyaatte.
Qabxii ishiin ArgatteEdit
Shaampiyoonaa Addunyaa kan Guddattootaa – Pilovdiiv, Bulgeeriyaa
Meetira 10,000 medaaliyaa warqee
Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa – Antiweerp, Beeljiyeem
Medaaliyaa meetii kan fiigicha dheeraa
Dorgommii Afrikaa Hundaa – Kaayiroo, Ejiipt
Meetira 10,000n medaaliyaa warqee
Olompiikii Gannaa – Baarseloonaa, Ispeen
Waancaa Addunyaa IAAF – Haavanaa, Kuubaa
Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa – Duuram, Ingilaand
Medaaliyaa warqee kan fiigicha dheeraa
Shaampiyoonaa Addunyaa – Guutanbarg, Iswiidin
Meetira 10,000n medaaliyaa meetii
Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa – Tuurin, Xaaliyaanii
Olompiikii Gannaa – Sidinii, Awustiraaliyaa
Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa kan Addunyaa – Vilaamura, Poorchugaal
Shaampiyoonaa Addunyaa – Edimenten, Kaanadaa
Maraatoonii Landan moo’atte
Maraatoonii Addunyaa kan Dubartootaa kan Tookiyoo moo’atte
Olompiikii Gannaa – Ateensi, Griis(Greece)
Meetira 10,000n medaaliyaa nahaasii
Maraatoonii Niwuu Yoorki moo’atte
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Daraartuu_Tulluu&oldid=31070"
Last edited on 5 Amajjii 2019, at 14:29